(၆၄)ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » (၆၄)ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
Posted by thuyamon on Feb 21, 2011 in Events/Fundraise, News | 10 comments
(၆၄)ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့အခန်းအနားကို တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့(၁၉-၂-၂၀၁၁) ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် မွန်ပြည်နယ် ရှိမြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာ အသီးသီးနှင့် အဝေးရောက်ပြည်ပရှိ မွန် အမျိုးသားများနေထိုင်ရာ နေရာအသီးသီးတို့တွင်လည်း ကျင်းပခဲ့ကြ သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်…
(၆၄)ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့(ဗဟို) ကျင်းပသည့် မွန်ပြည်နယ် ၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ကို ထွက်ခွါ လာရာမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မွန်ပြည်နယ် တစ်ခွင်မှာ ကျေးရွာဆိုရင်ကျေးရွာအလျှောက် ၊ မြို့နယ်ဆိုရင်လည်း မြို့အလျှောက် အင်္ကျီအဖြူ ၊ လုံချည်(ပုဆိုး)အနီ ၀တ်ဆင်ထားသောမွန်လူမျိုးများ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် မွန် အမျိုးသားနေ့အခန်းအနားကျင်းပနေကြတာကို မင်္ဂလာရှိစွာတွေ့ကြရရင်ပဲ အတိုင်းမသိကို ၀မ်းမြောက် ကြည်နူးမိပါတယ်… ကြက်သီးမွေးညှင်းများထမတတ်အောင် ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်နဲ့ခံစားရပါတယ်… အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ရတဲ့ညတွေများခဲ့ရပေမဲ့.. အဲဒီမြင်ကွင်းမြင်လိုက်ရတာနဲ့…မောတာပန်းတာ နွမ်းတာ လျတာ တွေဟာ ပိန်းကြာပင်ရေမတင်သလို ပျောက်ကွယ်သွားပြီး စိတ်အစဉ်သည်လည်းကြည်လင်အေးချမ်းကာ ခွန်အားတွေလည်း ပြည့်ဝလာပါတယ်…
တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့မွန်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ စည်းလုံးမှု အင်အားကမသေးလှပါဘူး…ဒါကလည်းအခုမှမဟုတ်ခဲပါဘူး ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ မွန်လူမျိုးဆိုတာ ကမ္ဘာကအသိအမှတ် ပြုထားတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်ပါလား…ရာဇ၀င်တစ်ခုကိုပိုင်စိုးထားခဲ့တဲ့ ပိုင်စိုးထားဆဲ သမိုင်းဝင်တဲ့လူမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရတွေ့နေကြရတာ ပဲမဟုတ်လား…
မွန်ပြည်နယ် ၊ သံဖြူဇရပ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ (၆၄)ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ (ဗဟို) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ လေးတွေရှုစားကြပါဦး………
ဒီလိုနဲ့ဟံသာဝတီပြည်တည်ထောင်တဲ့နေ့(တပို့တွဲလပြည့်ကျော် -၁ ရက်နေ့)ကိုအစွဲပြုပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ကနေစတင်ကျင်းပလာရာ ယနေ့အထိဆိုရင် (၆၄)ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီ…သည်လိုနေ့ထူးနေ့မြတ်တစ် ရက်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆင်နွဲခဲ့ရတာကို မျက်စိထဲမှာမြင်ယောင်တိုင်း ကြည်နူးရပါတယ်….မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် တွေလည်းတစ်ဖွားဖွားနဲ့ပေါ်ပေါက်နေမိပါတယ်…ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော် မသိတာလား နားမလည် တာလား တော့မသိဘူး…ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာနေပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့မွန်တိုင်းရင်းတစ်ယောက်ပါ… မွန် အမျိုးသား တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရေစက်မဆုံတာလား…ကံမကြုံတာလားတော့မသိဘူး မွန် အမျိုးသားနေ့ တိုင်းမှာ မွန်ပြည်နယ်မှာမရှိပဲ တခြားဒေသတွေမှာ သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေတာနဲ့ပဲကြုံဖြစ် ခဲ့ရပါတယ်… အဲ…ဒီနှစ်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပါတယ်…ရန်ကုန်မှာကျင်းပတန်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့လည်း နေခဲ့တာလည်းပါပါတယ်….
ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာ တစ်ချိန်က မွန်တိုင်းရင်းသားတွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်မြို့ပဲ မဟုတ်လား.. ရွှေတိဂုံစေတီတော်က သက်သေပင်မဟုတ်ပါလား…ဒါကလည်း သမိုင်းရာဇ၀င်နားမလည်တဲ့ ကလေးများပင် သိနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ…သည်တော့ ရန်ကုန်ဆိုတာ မွန်လူမျိုးတို့နေထိုင်ရာဒေသ ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့အညီ ယခုလက်ရှိအချိန်မှလည်းနေထိုင်နေကြတာပဲမဟုတ်လား….ဒီလိုဆို မွန်လူမျိုးတို့အထွဋ် အမြတ်ထားတဲ့ မွန်အမျိုးသားနေ့ဆိုတာကိုတော့ ကျင်းပခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်ယူဆမိ ပါတယ်… ဒါကလည်းကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်သာဖြစ်ပါတယ်….
ကျွန်တော်မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်မိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ဟာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ စုစည်းနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပဲ မဟုတ်လား…သည်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ မွန် ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင်း နဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ နဲ့ တခြားတိုင်းရင်းနွယ်စုတွေရဲ့ အရေးဟာ သည်နိုင်ငံရဲ့အရေးပဲမဟုတ်ဘူးလား…အခုတော့ဗျာ..ကျွန်တော် တို့မွန်လူမျိုးများအထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ မွန်အမျိုးသားနေ့ ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုပြီး အများပြည်သူရုံးပိတ် ရက်မဟုတ်တောင်မှ မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းများ ရုံးများပိတ်သည့်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်သင့်တာကို လစ်လျူရှုပြီး(တော်သေးတာက ဒီနှစ်မှာက စနေ၊တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာကျရောက်နေလို့) ရန်ကုန်မှာ မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပခွင့်ကိုပိတ်ပင် နောက်ဆုတ်ခိုင်းတာတော့ နည်းနည်းလွဲနေ သလိုဖြစ်နေ မလားပဲ…စဉ်းစား ကြည့်ကြပါဗျာ….မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား (တရုတ်၊ ကုလား)တွေရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကျတော့ ရုံးတွေပိတ်ပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေဆို တစ်ရက် မဟုတ်နှစ်ရက် ဟုတ်လုပ်လိုက်ကြတာ အားရစရာ(လူမျိုးရေးအရ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ. ဖြစ်နေသည့်အခြေအနေကို တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်)…
ဒါပေမဲ့ ကွန်တော်တို့မွန်အမျိုးသားနေ့ ကျင်းပဖို့ကျတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်ကျင်းပခွင့်မရခဲ့ပါဘူး… သည်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့တဲ့ ပင်လုံညီလာခံက တိုင်းရင်းသား များကိုယ်ပိုင်အခွင့် အရေးရရှိရေးဆိုတာ ဘယ်မှာလည်း… ဘယ်ကို ရောက်ကုန်တာလည်း… ကျွန်တော်တို့ တောင်းနေတာ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်ရနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး… တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းတန်းတူ လွတ်လပ်ခွင့် ရရှိရေးပါ…… မွန်နှင့်ဗမာက ညီအစ်ကို တွေပါဆိုပြီး ရောချကာ မွန်လူမျိုးပပျောက်သွား စေ တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တွေကိုလည်း သည်ထက်ပိုမိုမလုပ်စေချင် တော့ဘူး…ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပြီလို့လည်း ထင်မြင် မိပါတယ်….တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုလုံးပျောက်ကွယ်သွားအောင် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိဆောင်ရွက်နေတာကတော့ ခံရတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့ မတရားမှုတစ်ခုသာဖြစ်မယ်ဆိုရင် မှားမလားဗျာ….
တစ်ခုတော့ရှိတယ်…ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပခွင့် မရခဲ့ ပေမဲ့လည်း ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့မှာကျရောက်ခဲ့တဲ့ ချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုတော့တစ်ခမ်းတနား နဲ့ကျင်းပခွင့် ရတဲ့အတွက် ချင်းတိုင်းရင်းသားများအတွက် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်…ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ နောင်နှစ်မှာ မွန်အမျိုးသားနေ့ကို ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပခွင့်ရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်…. ကျင်းပခွင့်ပေး နိုင်ကောင်းရဲ့လို့ လည်းတွေးမိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ မွန်အမျိုးသားနေ့ကိုရန်ကုန်မှာ အခုလိုဘာကြောင့် ကျင်းပခွင့်မရတာလည်းဆိုတာ ကိုတော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ အစဉ်တွေးတောနေရတဲ့ ကွက်လပ် တစ်ခုဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုတာကိုတော့…….
သည်ကွက်လပ်လေးကိုဘယ်သူဖြည့်ပေးကြမှာလည်း….ကျေးဇူးပြုပြီးတော့….ပြောပြပေးကြပါလား… ဘာကြောင့်လည်း…ဘာ့အတွက်လည်း….ဘာဖြစ်လို့လည်း……တခြားဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း သည် လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးခံနေကြရပြီလည်း….သည်လိုမျိုးမကြုံမတွေ့ကြရပါစေနဲ့လို့လည်းဆုတောင်းနေပါတယ်….
(အထက်ပါရေးသားချက်သည်ကျွန်တော်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၏အတွေ့အကြုံနှင့် ရင်ဖွင့်ရေးသား ချက် သာဖြစ် သည့်အတွက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မျှမသက်ဆိုင်ပါ…..)
thuya mon has written2post in this Website..
View all posts by thuyamon →
ဓါတ်ပူံတွေတင်လို့ မရရင် ..အယ်ဒီတာ editor@myanmargazette.net ဆီ အီးမေးလ်ပို့ လိုက်ပါနော..။
ဓါတ်ပုံတင်မရလို့ အယ်ဒီတာ ထံမေးလ်နဲ့ပို့ထားပါတယ်
ပြည်ထောင်စုကြီးထဲ စည်းလုံးသိုက်မြိုက်စွာ နေချင်ရင် ဗမာမျိုးနွယ်တွေအရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက .. တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေကိုရှေးရှေးက လုပ်ခဲ့မိတာတွေ အတွက် ထပ်ခါတောင်းပန်ဖို့ပဲ..။
ဒါဟာ မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့်လည်း .. ဂျပန်အစိုးရအသစ်တက်တိုင်း .. သူတို့ ဖက်ဆစ်လက်ထက်ကနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေ ကိုယ်တိုင်သွား တောင်းပန်နေကြတာပေါ့..။ ကြေအေးခွင့်လွတ်ဖို့လည်း .. ခွင့်တောင်းရတာပါ..။
ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာ .. အဲဒီဒေသခံတွေကို ဥပဒေအရလည်း အထူးအခွင့်အရေး ပေးရတာပါ.။
ဒါမျိုး နေးတစ်အမေရိကန်(အင်ဒီးယန်း) တွေကို အမေရိကန်ဥပဒေတွေက ပေးထားတယ်..။
မြန်မာပြည်ကလည်း.. အစိုးရအသစ်တက်တိုင်း.. အဲဒီကစရမယ်..။ စသင့်တယ်..။
ဟုတ်တယ်ဗျာ… တင်ပြသွားတာလေးက ဖြစ်သင့်တာလေးပါ….
အမျိုးသမီး အလံကိုင်အဖွဲ့ကို အားပေးပါတယ်။ နာနာဆိုကျနော့်ဖေးဗရိတ် မင်းသမီးပေါ့။ ဒါနဲ့ ရွာထဲက ဆရာမတော်ဘဒ္ဒန္တမိုက်ကယ်အောင်ပုက မွန်သွေးစပ်ပုံရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့အချစ်ဟောင်းက မွန်မဆိုလား။
မွန်လူမျိုးတွေမှာ အုပ်စုနှစ်စုကွဲနေတယ်လို့ မြင်တယ်ဗျ
တစ်စုက မြန်မာတွေနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံနိုင်တဲ့ မြို့ ပြနေလူတန်းစားနဲ့ 
အဲ့သည်ကျေးလက်နေလူတန်းစားတွေမှာ မြန်မာလူမျိုးကို မုန်းတီးမှုအရမ်းထင်ရှားတယ်
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ စာပေလေ့လာမှုအားနည်းတယ်လို့ ဆိုရမလားဘဲပေါ့နော
အထောက်ထားမခိုင်လုံတဲ့ လိုသလိုရေးထားတဲ့သမိုင်းစာအုပ်တွေကိုဘဲ ဖတ်ကြတာရယ်
လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ စစ်တပ်တွေနှိပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ချက်တွေရယ်က
သူတို့ ကို ကောင်းကောင်းနားလည်စေခြင်တယ်
ဗမာတွေအနေနဲ့ လည်း တိုင်းရင်းသားတွေကို အလေးထားသင့်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေးထူးနေ့ မြတ်တွေကလည်းရှိတယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရရုံးတွေကို တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်းသင့်တယ်
တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးရဲ့ နေ့ ကိုရောက်ရင် အဲ့ဒီဝတ်စုံကိုဝတ်ကြပေရော့ပေါ့
အဲ့သည်နေ့ မျိုးမှာ သူတို့ ရဲ့ တိုင်းရင်းသားအလံတွေကို
နိုင်ငံတော်အလံနှင့် နိမ့်တဲ့နေရာမှာ တွဲပြီးလွှင့်ထူသင့်တယ်
ပိတ်ရက်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် သက်ဆိုင်သူတွေပိတ်ကြပေါ့
သူတို့ ရဲ့ စာပေသင်ကြားမှုတွေကို လွပ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်တယ်
ဒါနဲ့ ကိုကိုကြောင်ပြောတဲ့ အချစ်ဟောင်းဆိုတာက
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို မေ့နေတာလား၊ မသိတာလား။
စာပါအချို့ အကြောင်းအရာတွေက မွန် ၊ ဗမာ မုန်းတီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ သဘောသက်ရောက်နေတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်သွားလို့လား…ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အထဲမှာ အဲဒီလိုဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိပါဘူး…ဖြစ်စရာလည်း မရှိပါဘူး….ကိုယ်မရလို့ကိုယ်မရတာကိုပြောတာပါ…researcher အနေနဲ့လည်း သမိုင်းကြောင်းအထောက်အထား တွေကိုထပ်မံလေ့လာကြည့်ပါဦး…ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာလား တကယ်ဖြစ်နေတာလားဆိုတာကိုပေါ့….ဗမာနဲ့မွန်ဆို တာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းပါ….တိုင်းရင်းသားအဆင့်မှာပဲ တန်းတူထားသင့်တယ်လို့မထင်မိဘူးလား…ဘယ်စာအုပ်ထဲ မှာများ ဗမာလူမျိုးသည် အဓိကတိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီး ကျန်လူမျိုးများသည် အရန်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိပါသလား…ဒါပေမဲ့ ရရှိခံစားနေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြန်တွက် ကြည့်လိုက်ပါဦး…တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုမဆွေးနွေးချင်ပါဘူး…အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ မွန်အမျိုးသားနေ့ ကျင်းပခွင့်မရရှိတဲ့အကြောင်းမှာတင် လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလိုဖြစ်မနေဘူးလားခင်ဗျာ… ကျွန်တော့်ရည်ရွယ် ချက်က သူသာတယ်ငါသာတင်လို့မဆိုလိုဘူး….ငါရသင့်တာဘာကြောင့်မရခဲ့သလဲဆိုတာကိုပါ….အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့…အကြောင်းပြချက်ကလည်း မိသားစုတစ်ခုလုံးမှာ မင်းတစ်ယောက်တည်းသည်ထမင်းဝိုင်း မှာမစားနဲ့အပြင်မှာသွားစားဆိုတဲ့ အမိန့် ခံရတဲ့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်တော့ အံ့မခန်းကိုထူးဆန်းမနေဘူး လား မတူဘူးမတန်ဘူးဆိုသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့…နောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဆိုတာ….ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့မသင့်အရာမဟုတ်လား…အိမ်နှစ်အိမ်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ မတည့်ကြဘူး တစ်အိမ်အိမ်က မီးလောင်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင် ကျန်နေတဲ့အိမ်က နှစ်ဆတိုးတက်လာမယ်လို့ ထင်ပါသလား…ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ကပဲလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသလို…ကျန်နေတဲ့အိမ်ကလည်း ပိုပြီးမချမ်းသာလာ ပါဘူး…နှစ်အိမ်ချင်းဖေးဖေးမမ လုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်အိမ်စလုံးတိုးတက်လာမှာပဲမဟုတ်လား…. ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘယ်သူ့ကိုမှမရွည်ရွယ်ဖူး …တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းသွေးကွဲစေတာလည်း မဟုတ်ရပါဘူး….လူတစ်ဦးချင်းရဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးပါ…ဒါပေမဲ့ မီးလောင်တာတော့မီးလောင်တယ်လို့ ပြောရမှာပဲ…မီးလန့်တယ်လို့ဆိုပြီးပေါ့သွားအောင်ရေးလည်းမထူးပါဘူး…ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူး…
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေ သက်ဆိုးရှည်နေတာ
တကယ်လို့ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားအရေးခင်းမရှိရင်
ခင်ဗျားတို့ တစ်ဖွဲ့ လုံး
မင်းတို့ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးမီးမှန်မှန်လာပါစေကွာ။